နှစ်တွေကြာညောင်းလာပေမယ့် အရသာမပြောင်းလဲတဲ့ မန္တလာမြေက စန္ဒာမေ | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
စန္ဒာမေဆိုတာ ဖက်ထုပ်ကိုကောင်ကောင်းကြီး အရသာခံတတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပေါ့။ငယ်ငယ်က ကျောင်းဆင်းပြီဆို ဖက်ထုပ်ကြော်စားချင်လို့ အမေ့ကို ပူဆာလိုက်ရတာ အမော။ ဂျင်းထည့်ထားတဲ့ ဆော့စ်လေးထဲကို ဖက်ထုပ်ကြော်လေးနှစ်ပြီး စားလိုက်ရရင် တစ်နေကုန်မောသမျှ အမောပြေသွားသလိုပဲ။
စျေးကလည်းသက်သာတယ်လေ ဖက်ထုပ်ပေါင်းတစ်ပွဲမှ (၁၃၀၀)၊ ဖက်ထုပ်ကြော်ကို (၁၇၀၀) ပဲကျတာဆိုတော့ ဘတ်ဂျက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ကိုယ်တွေဆို ငယ်ငယ်တည်းက တစ်ခါစားရင် (၂)ပွဲ (၃)ပွဲလောက်ထိ စားတတ်တာ။
မိသားစုဖက်ထုပ်ပေါင်း/ကြော် ဆိုတာလေးလည် ရှိသေးတယ်။သူကကျတော့ ဖက်ထုပ်ကို ပီဇာလို အဝိုင်းလေးလုပ်ထားတာ (လူများရင် ပိုတန်တယ် ဒါလေးက)။ တစ်ပွဲကိုမှ ဖက်ထုပ်ပေါင်းကို (၃၅၀၀) ဖက်ထုပ်ကြော်ဆို (၄၀၀၀) လောက်ပဲရှိတယ်။
ဒီဆိုင်မှာချန်ထားခဲ့လို့မရတာက ဆာတေးပါပဲ။သူ့ဆိုင်က ဆာတေးကိုစားပြီးတည်းက တခြားဘယ်ဆိုင်က ဆာတေးကိုမှ မကြိုက်တတ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ကနို့အေးကို တစ်အားကြိုက်တော့ ဖက်ထုပ်ပဲစားစား၊ဆာတေးပဲစားစား နို့အေးတော့အမြဲသောက်တယ်။
အခုတော့ အသက်ကြီးလာလို့နဲ့တူတယ် နို့အေးမကြိုက်တော့ဘူး။
Tiger ပြောင်းကြိုက်နေပြီ (Tiger နဲ့ ဖက်ထုပ်ကလည်း အသေလိုက်တာနော်)
1. Sandar May (78th Street)
Corner of 37th Street & 78th Street, Mahar Aung Myay Township, Mandalay
2. Sandar May (79th Street)
79th Street, Between 32nd & 33rd Streets, Chan Aye Zan Township, Mandalay
3. Sandar May (30th Street)
30th Street, Between 62nd & 63rd Streets, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay
4. Sandar May (62nd Street)
62nd Street, Between Manaw Hari & Khaing Shwe War Streets, Chan Mya Thar Zi Township, Mandalay
5. Sandar May (80th Street)
80th Street, Between 37th & 38th Streets, Mahar Aung Myay Township, Mandalay
Food and Drink Read 96 times